Maamulka G/Banaadir oo sheegay in musharixiinta u adeegaan dowlado Shisheeye - Awdinle Online
Maamulka G/Banaadir oo sheegay in musharixiinta u adeegaan dowlado Shisheeye
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa soo saaray qoraal loogu baaqayo Shacabka ku nool Gobolka Banaadir inay ka Shaqeeyaan sugida Amniga Gobolka sidoo kalena eedeyn loogu jeediyay musharixiinta Madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan ku shiray Magaalada Muqdisho.
Qoraalka Maamulka gobolka Banaadir ayaa waxaa lagu sheegay in, iyada oo la guda galayo waqti doorasho inay garwaaqsan yihiin inay muhiim tahay sugida Amniga Caasimadda, waxaana Bulshada loogu baaqay inay ka qeyb qaataan sugida Amniga Magalada Muqdisho.
Sidoo kale Maamulka Gobolka Banaadir ayaa sheegay inay ka xun yihiin qoraal dhawaan kasoo baxay musharixiinta Madaxweynaha oo ahaa mid eedeyn kulul loogu jeediyay Madaxweyne Farmaajo & Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, waxana ay sheegeen in eedeyntaas aan waxba ka jirin.
“ Maamulka Gobolka Banaadir waxaa uu aad uga xun yahay qoraalka lagu faafiyay Baraha Bulshada ayna soo saareen qaar kamid ah Musharixiinta Madaxweynaha oo lagu qoray eed iyo cambaareyn aan sal iyo raad laheyn oo loo jeediyay madaxda qaranka ee dalka iyo guddoomiyaha Gobolka Banaadir loona turjumay si qaldan, iyada oo muhsarixiinta ka leeyihiin qoraalkooda dano guracan oo u adeegaya shisheeye ayaa lagu yiri” Qraalka Maamulka Gobolka Banaadir.
Sidoo kale Maamulka gobolka Banaadir ayaa sheegay in xaqiijinta Amniga iyo xasiloonida Caasimadda dalka si dadka ku nool ay nabad ugu noolaadaan inay tahay waajib sharci ah uuna u xilsaaran yahay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir, sidoo kalena ay ka digayaan habdhaqan kasta ( hadal & ficil) ee dhiiri gelinaya dib u dhac iyo casilooni darro taasoo keeni karta natiijo aan la mahdin, isla markaana aysan ogolaaneyn inay tasi dhacdo.
Qoraalkan kasoo baxay Maamulka Gobolka Banaadir ayaa waxaa uu kusoo aadayaa xilli dhawaan guddoomiyaha Gobolka Banaadir uu ka sheegay munaasabad ka dhacay muqdisho in Musharixiinta Madaxweynaha hadii ay tallaabo qaadaan la weerari karo una carari doonaan meelihii laga soo diray, waxaana hadalkaas musharixiinta ay ku sheegeen inay tahay mid uu o soo dhiibay Madaxweyne Farmaajo si musharixiinta loo weeraro.
Previous articleRW Rooble oo Amar dul-dhigay Golihiisa Wasiirada
Next articleSoomaali dil & dhaawac loogu geystay Koonfur Afrika